Knowledges Zone: PES 2011- RELOADED + Crack
ဘောလုံးဂိမ်း (3D) အသစ်ရှာပြီး တင်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ 2011 update ဖြစ်ပါတယ်..။ Version အသစ်ထွက်တာနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် Crack ဖိုင်ပါ ထည့်သွင်းပေးထားတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Window XP ; Vista ;7အားလုံးအတွက် ကောင်းကောင်း ကစားနိုင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး System လိုအပ်ချက်လေးတွေကတော့ Intel Pentium အနေနဲ့ IV 2.4GHz အနည်းဆုံးရှိရပါမယ်..။ equivalent processor အနေနဲ့ကတော့ အနည်းဆုံး 1GB RAM ရှိရပါမယ်။ video card အနေနဲ့ 128MB Pixel Shader 3.0 (NVIDIA GeForce 6600 or AMD/ATI Radeon x1300 video card) ရှိရပါ့မယ်။ အခုကျနော်ပြောတဲ့ System လိုအပ်ချက်တွေက တော့ Minimum ( အနိမ့်ဆုံး ) ဒီလောက် ရှိရမယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ မိတ်ဆွေတို့ ကွန်ပျူတာက System ပိုင်းမှာ ပိုပြီး အားသာချက်ရှိနေမယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒီ ဂိမ်းရဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ် အနေနဲ့ကတော့ ISO .. 5.19 GB ရှိပါတယ်။ ဘောလုံးဂိမ်း ၀ါသနာရှင် သူငယ်ချင်းများ စိတ်ဝင်စားရင်အောက်မှာ ဒေါင်းပေတော့ဗျာ ၁၂ ပိုင်းရှိပါတယ်။ ကစားလို့တော့ တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျို့  ဒါကြောင့် Share လိုက်ပါတယ်... စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့သာ ဒေါင်းပေတော့....။
6. 6. Support the software developers. If you like this game, BUY IT!
.............♣ ပျော်ရွင်စရာ December ဖြစ်ပါစေဗျာ Merry Christmas ပါ ♣..............